Indlela yokwahlula isikrini kwi Windows 10 kunye neMac | Iindaba zeGajethi
Indlela yokwahlula isikrini kwi Windows 10 kunye neMac
Ngokuqinisekileyo ngaphezulu kwesihlandlo esinye ukhe wacinga ukuba lixesha lokuba uthenge iliso lesibini, iliso lesibini lelo ivumela ukuba sisebenze ngendlela ebutofotofo ngakumbi xa sisebenzisa izicelo ezimbini. Kuxhomekeka kwiisentimitha zeso liliso, ukuba asifuni ukushiya amehlo ethu, sinokukhetha ukwahlula isikrini.
Ukuba sihambisa indawo ehlala ezi zimbini, okanye nangaphezulu, izicelo esizifunayo zokutshixa okanye ukwenza nawuphi na omnye umsebenzi, Isidingo sokuthenga esweni ayimi, kuba ayisiyongxaki kuphela ukujonga iscreen esinye, kodwa kwakhona, siya kugcina indawo edesikeni yethu, into engadluliyo.
Uninzi lwezicelo, njengezikhangeli, zenzelwe ukuba guqula ngokuzenzekelayo ujongano lwayo xa sinciphisa okanye sandisa ubungakanani bayo, ukuze sibonise ulwazi oluyimfuneko ngaphandle kokuthatha indawo engaphezulu kunokuba iyimfuneko, ke ukuba inkxalabo yakho imalunga nale ngxaki ilula, ungalibala ngayo.
IWindows kunye neMacOS zisivumela ukuba sahlule isikrini ngokwendalo akukho mfuneko yokufaka nasiphi na isicelo sangaphandle. Nangona kunjalo, ngelixa inani leenketho esizibonelelwa yiWindows liphezulu kakhulu, kwi-macOS, inye kuphela into onokukhetha kuyo, ukhetho olunokuphelisa indawo yokufaka isicelo, ngenxa yoko kubasebenzisi abaninzi, kubandakanya nam, ayisiyiyo ukhetho olufanelekileyo, ke sinyanzelekile ukuba sifake izicelo zomntu wesithathu.
1 Yahlula isikrini ngaphakathi Windows 10
1.1 Yahlula isikrini kwi windows ezimbini nge Windows 2
1.2 Yahlula isikrini kwi windows ezimbini nge Windows 4
1.3 Guqula ubungakanani bezicelo zesahlulo sescreen
2 Ukwahlula isikrini kwi-Mac
3 Yahlula isikrini kwiWindows 7 / 8.X
Yahlula isikrini ngaphakathi Windows 10
ukuba Yahlula iscreen sedesktop yethu kwi-2, 3 okanye 4 windows kwi Windows 10Akunyanzelekanga ukuba ufake nasiphi na isicelo ngaphakathi Windows 10, kuba iMicrosoft ngokwendalo isinika indlela esivumela ukuba siyenze ngokukhawuleza nangokulula ngokusebenzisa imouse.
Ukuba ungumsebenzisi oqhelekileyo we iindlela ezimfutshane zokucofaUnokufikelela kulo msebenzi ngokudibanisa kwezitshixo, indlela eya kuthi iphinde ifumaneke kamva.
Yahlula isikrini kwi windows ezimbini nge Windows 2
Eyona ndlela ikhawulezayo yokwahlula iscreen sekhompyuter yethu kwiiwindows ezimbini usebenzisa imouse. Ukwenza oku, kufuneka sivule izicelo ezimbini esifuna ukwahlula kwiscreen kwidesktop enye.
Okulandelayo, kufuneka ucofe kwibar ephezulu yesicelo kunye Yitsale kwicala lesikrini apho sifuna ibekwe khona (ngasekhohlo okanye ngasekunene) kwaye silinde umzuzwana kude kuvele isakhelo esiza kuthi sibonise ubungakanani besicelo.
Nje ukuba silungelelanise esinye sezicelo kwelinye lamacala esweni sethu, kufuneka senze inkqubo efanayo kunye nesinye isicelo. Into emnandi malunga neli Windows 10 kukuba ayisinyanzeli ukuba silungise esinye isicelo ecaleni, ke sinokushiya imvelaphi yedesktop enefestile yesicelo esidadayo.
Yahlula isikrini kwi windows ezimbini nge Windows 4
Ukwahlula isikrini sekompyuter kunye nezicelo ezine ekufuneka sizivulile, kufuneka landela le nkqubo ingentla, kodwa ngeli xesha, kufuneka sirhuqe usetyenziso esifuna ukusasaza kwiimbombo ze desktop apho sifuna ukubabeka khona.
Nje ukuba isakhelo sendawo abaya kuhlala kuyo siboniswe, kufuneka nje khupha imouse ukwenza usetyenziso lujonge ekuthatheni ubungakanani olo. Lo msebenzi usivumela ukuba sihlengahlengise izicelo ezintathu ngokuzenzekelayo, ke ukuba yile nto siyifunayo, kuya kufuneka silungelelanise ubungakanani besicelo ngasinye ngesandla.
Guqula ubungakanani bezicelo zesahlulo sescreen
Ayisoze ine imvula ngokuthanda komntu wonke, kwaye kule meko akukho njalo. Kungenzeka ukuba ubungakanani buboniswe sisicelo ngasinye esesahlule kwiscreen ayihambelani neemfuno zethu.
Ukuba le yimeko yakho, kwaye ufuna ukulungisa kancinane ububanzi bezicelo, kuya kufuneka uye kwi umgca osembindini owohlulahlula kwaye urhuqe imouse ukwenza iifestile ezimbini okanye ezine ziboniswe zikhulu okanye zincinci.
Ukwahlula isikrini kwi-Mac
Umsebenzi kwi-macOS esivumela ukuba sahlule iscreen kwizicelo ezimbini kuthiwa Yahlula Imbono, Igama elifanayo lomsebenzi ofanayo okwafumaneka kwi-iPad. Eli nqaku laziswa kwi-macOS yi-OS X El Capitan, ke ukuba unenguqulo endala kunale, kuya kufuneka ubhenele kwizicelo zomntu wesithathu ukonwabela usetyenziso lwescreen ezimbini okanye nangaphezulu.
Umsebenzi walo msebenzi awukhawulezi kwaye unomdla njengalowo ufumaneka kwi-Windows 10.Ukusebenzisa umsebenzi wokwahlulahlula okuvumela ukuba sahlule iscreen kwizicelo ezibini, kufuneka sisebenzise iqhosha lokwenza nkulu, iqhosha eliluhlaza kubonisiwe kwi ikona ephezulu ngasekunene kwesicelo / iwindow. Kufuneka sicinezele kwaye sibambe iqhosha eliluhlaza de zonke izicelo esizivulileyo kwidesktop ziboniswe.
Ke sinayo khetha ezo zicelo zimbini sifuna ukuboniswa embindini wesikrini. IMacOS iya kwenza ubungakanani kwakhona beziapps zombini ukuze zibonise ngokulinganayo kwiscreen. Kulapho lo msebenzi uphela khona, umsebenzi lowo ayisivumeli ukuba siguqule ubungakanani beewindowss eziboniswe kwiscreen, ngokungathi singenza ngaphakathi Windows 10.
Enye into ebuyelela ukuba lo msebenzi usinike yona yile susa ngokuzenzekelayo i-dock yeapp ukubonisa usetyenziso kwiscreen esigcweleyo, ke ukuba sifuna ukufikelela kolunye usetyenziso, kufuneka sitshintshe idesktop, siyeke ukusebenzisa umsebenzi okanye ukufikelela kwisikhululo sedoksi ngesinqumli sekhibhodi.
Yahlula isikrini kwiWindows 7 / 8.X
Ukwahlula iscreen kwikhompyuter yeWindows 7 okanye yeWindows 8.x yinkqubo esinokuyenza ngeendlela ezimfutshane zekhibhodi ngaphandle kokusebenzisa izixhobo zomntu wesithathu. Le ndlela iyahambelana nayo Windows 10, nangona inkqubo yokwenza kwimouse endiyichazileyo ngasentla ngokukhawuleza kwaye kulula.
Ukuba sifuna ukubonisa usetyenziso ezimbini kwiscreen sekhompyuter yethu, kufuneka sikhethe kuqala isicelo sokuqala sokufudusa kwaye ucofe iqhosha leqhosha leWindows, Cofa iscroll arrow ngasekhohlo okanye ngasekunene, Kuxhomekeke kwindawo esifuna ukuyibeka kuyo.
Kodwa ukuba iimfuno zethu zidlula bonisa ii -apps ezi-4 kwiscreenSingayenza ngokudityaniswa okufanayo kwezitshixo, kodwa sikwasebenzisa iintolo ezisezantsi nezisezantsi ukufumana indawo esikhangela kuyo usetyenziso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Windows » Indlela yokwahlula isikrini kwi Windows 10 kunye neMac
Ungayeki njani ukubona iiposti kwi-Instagram ngaphandle kokulandela
Uyibona njani i-iPhone screen kwiTV ngeChromeCast